‘ndeha hanao vakisiny | mandimby maharo
‘ndeha hanao vakisiny	Posted on 22 April 201322 April 2013 by Mandimby Maharo	Ny aretim-pivalanana, ny tazomoka ary ny aretin’ny taovam-pisefona no mahafaty ny zaza latsaky ny 12 volana eto Madagasikara. Zaza 70 isan’andro no maty vokatr’ireo aretina ireo. Ny fisorohana amin’ny fanaovana vakisiny ny zaza sy ny fanarahamaso ny fahasalaman’ny reny bevohoka ihany nefa no afahana misoroka ireo valan’aretina mamono ireo.
“Arovy ny aina, sorohy ny aretina, andeha hanao vakisiny”
Manomboka anio 22 aprily ka hatramin’ny 26 aprily ho avy izao ary dia hanatontosa ny herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza isika eto Madagasikara. Herinandro hanaovana hetsika manokana amin’ny fanaovana vakisiny ireo vehivavy bevohoka sy ny zaza latsaky ny 5 taona. Mifanojo amin’ny indrindra amin’ny herinandro afrikana amin’ny fanaovana vakisiny izany hetsika ara-pahasalamana izany. Zaza maherin’ny 5 tapitrisa sy reny eo amin’ny fahefabolan’ny vohoka 1 tapitsisa no kendrena ho atao vakisiny mandritra ity herinandro ity. Ankoatry ny vakisiny dia hisy koa ny fizarana Vitamine A ho azy ireo. Hanaovana ezaka manokana koa ny hanaovana vakisiny Tetanosy ho an’ireo vehivevy ireo.Miampy fitilina ny otrikaretina Vlh/Sida sy Angatra io.
Hetsika faha 14 izao atao amin’ity herinandro ity izao raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Fanentanana noho izany no atao amin’ireo izay voakasik’izany hetsika izany ary efa mampahafanatatra sahady koa ny ao amin’ny ministeran’ny fahasalamana sy ireo mpiray ombon’antoka aminy fa hotohizana hatrany izany hetsika izany. Amin’ny manaraka ary dia hiampy vakisiny miady amin’ny rotavirus, fanefitry ny aretim-pivalanana ny fizarana maimaimpoana ho atao.
Tags: Fahasalamana, Madagasikara, Vakisiny, Vehivavy, Vih/SidaCategories: societé